Faahfaahin: Macalin Qur'aan oo xaaskiisa Sun ku dishay Magaalada Beledweyne iyo Booliska oo... - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kiis nooc cusub ah oo ka dhacay magaalada Hargeysa, kaaso haweeney ay ninkeeda ku dishay Sun ay Raashin ug dartay.
Arrintan ayaa xalay ka dhacay xaafadda Xaawo-taako ee magaalada Beledweyne, gobolka Hiiraan, iyadoo haweeneyda oo la sheegay inay in dhowaan la guursaday ay ninkeeda oo ahaa macalin dugsi qr’aan Sun ugu dartay raashin, sidaasina uu ku geeriyooday.
Macalinka la sumeeyay ayaa lagu magacaabi jiray Cumar Macalin Muxumed, waxaana maanta lagu aasay magaalada Beledweyne, waxaana ka qeyb galay boqolaal qof oo geeridiisa aad uga naxay. Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku dhigay saaka haweeneydii falkaasi geysatay.
Dhacdadan oo si weyn looga hadal hayo magaalada Beledweyne ayaa ah mid ku cusub dadka, waxayna ka mid tahay caqabadaha ka jira xaaladdaha Qoyska.
Haweeney dishay ninkeeda
Previous articleMaxaa kasoo baxay kulankii RW Rooble iyo Xildhibaannada kasoo jeeda Somaliland..? (Arrin aan la fileyn)
Next articleRW Rooble oo isu keenay laba wasiir oo dagaal ku dhex maray Baraha Bulshada (Raaligelin mise is-cafin?)